Mareykanka oo malaayiin lacag ah si khaldan ugu diray dad dhintay - Calanka.com
Wasaaradda maaliyadda dalka Mareykanka ayaa malaayiin dollar oo lacag ceyr ah u dirtay dad kor u dhaafaya hal miyan oo ruux oo dhintay.
Lacagtan ayay dowladda uga golaheyd sidii loogu caawin lahaa dadka Mareykanka ku dhaqan sababo la xiriira la tacaalidooda dhanka dhaqaale xilliga ay ku jireen bandowga cudurka coronavirus.
Dowladda ayaa guud ahaan u dirtay shacabka jeegag kor u dhaafaya 159 million oo lacag ahaan ay ku qornaayeen $267 billion, waxaana lacagtaasi qeyb ka mid ah ay ku dhacday gacanta qaraabada dad horay u dhintay iyo kuwo kale oo cudurka corona uu dilay.
Hal milyan oo ruux oo u diiwaan gashan dhimasho ayaa waxaa loo diray lacag gaareysa 1.4 billion dollars, waxaana ay iminka bilowday dowladda in ay lacagtaasi ka daba tagto oo ay qaraabada dadkaasi dhintay ku wargeliso in ay dib usoo celiyaan.
Khaladkan ayaa yimid kadib markii hay`adda IRIS oo u qaabilsan Mareykanka dhanka canshuuraha eysan eegin ama hubin liiska dadka loo dirayo lacagaha in ay dhinteen iyo in kale.
Dowladda ayaa lacagtan si otomaatig ahaan ugu dirtay dadka canshuuraha laga qaaday sannadka 2018-2019, kuwaas oo qaarkood dhintay, qaar kalena uu dilay cudurka korona.
Waxaa sidoo kale jira dad badan oo da`a ahaa oo iyana dhintay kuwaas oo lacagaha loo diray.
Dowladda Mareykanka ayaa bishii April shaaca ka qaaday in ay lacag cayr ahsiineyso dhammaan shacabka dalkaasi, waxaana ay calaa qof oo qaan-gaar ah u qoondeysay 1.200 dollar, halka carruurtana loo qoondeeyay min 500 dollar calaa cunug.
Mareykanka ayaa waxaa ku nool dad gaaraya 329,8 milyan oo ruux, waxaana cudurka corona uu kaga dhacay dad u dhaxeeya 16,5 ilaa 26,4 milyan oo ruux.
124.000 oo ruux ayaa cudurka corona ugu geeriyooday Mareykanka.
CORONAVIRUS: Sacuudiga oo faray dadkiisa in ay salaadda taraawiixda iyo tan ciidda ku tukadaan guryohooda